विश्वकपका सबैभन्दा पाका र कान्छा खेलाडी | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध विश्वकपका सबैभन्दा पाका र कान्छा खेलाडी
खेल विविध, विश्वकप विशेष 790 views
विश्वकपका सबैभन्दा पाका र कान्छा खेलाडी
फूटबललाई विश्वकै रोमाञ्चक खेलमध्ये एक मानिन्छ । ९० मिनेटको समयमा एउटा बलको पछाडि २२ जना कुद्ने यो खेललाई केहीले पट्यारलाग्दो पनि मान्लान् । विविध रङरूप, कद र उमेरका खेलाडीलाई देख्न पाइन्छ यो खेलमा । कयौंपटक खेलिसकेका खेलाडीले यही प्रतियोगिताबाट सन्न्यास लिएका हामीले देखेका छौं । कयौं नयाँ प्रतिभाले यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाइरहेका छन् । यसपटक ३२ टीमका ७ सय ३६ खेलाडीहरू रूसका १२ ओटा स्टेडियममा उत्रिँदै छन् ४० दिनका लागि । यी खेलाडीमध्ये सबैभन्दा पाको र सबैभन्दा कान्छा को होलान् ? यिनीहरूबीचको उमेर अन्तर कति होला ? तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?
यसअघि कोलम्बियाका फेयर्ड मोण्ड्रागनले ४३ वर्ष ३ दिनको उमेरमा विश्वकप खेलेर सबैभन्दा पाका खेलाडी बनेका थिए । क्यामरुनका रोजर मिल्ला, उत्तरी आयरल्याण्डका पाट जेनिङ्स, बेलायतका पिटर शिल्टन र इटलीका डिनो जोफ पनि विश्वकपका सबैभन्दा पाका पाँच खेलाडीभित्र पर्छन् । आफ्नो जीवनको अन्तिम विश्वकप खेल्दा यिनीहरूको उमेर क्रमशः ४२ अर्ब १ महीना ८ दिन, ४१ वर्ष, ४० वर्ष ९ महीना १९ दिन र ४० वर्ष ४ महीना १३ दिन थियो ।
१० असार २०७५, आईतवार ०८:१८
१० असार २०७५, आईतवार ०८:१६
१० असार २०७५, आईतवार ०८:१४